'तँ बुढो के को हिरो ? भन्दा रिस उठ्छ'- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
फिल्म लेखक, निर्माता एवं कलाकार दीपकराज गिरीका पछिल्ला फिल्म ब्लकबस्टर छन् । तर बजारु मसलाको हाबी र कलात्मकता निर्धो हुने भएकाले चर्को आलोचना हुने गर्छ ।
आश्विन २५, २०७६ कान्तिपुर संवाददाता
अघिल्ला दसैंमा तपाईं अरूलाई धकेल्नुहुन्थ्यो । यसपटक आफैं धकेलिनुपर्‍यो । कसरी फेल हुनुभयो ?
‘छ माया छपक्कै’ मेरो छैटौं फिल्म हो तर मैले दसैं खान पाएको ‘छक्कापञ्जा २’ मात्र हो । ‘छक्कापञ्जा ३’ घटस्थापनामा रिलिज गर्नुपर्‍यो । घटस्थापनामा बिदा हुन्न । मेसीले फुटबल खेल्दा चारतिरबाट घेर्छन्, त्यसमा मेसीले दुःख मान्नुहुन्न । बरु सबैलाई छलाएर कसरी गोल गर्ने भनेर दिमाग लगाउनपर्छ, म त्यही गर्दै छु । त्यसैले पछि सरें ।
तपाईंलाई चाडपर्वचाहिँ चाहिने नै हो ?
सलमान खानलाई इद, शाहरूखलाई नयाँ वर्ष किन चाहियो ? यसको मतलब हो, ठूलो कुरालाई ठूलै डेट चाहिन्छ ।
तपाईं नेपालको स्वघोषित सलमान हैन ?
इतिहास हेर्नुस्, ‘छक्का–पञ्जा ३’ ले १९ करोड व्यापार गर्‍यो, ‘छक्का–पञ्जा २’ ले १४ करोड अनि ‘छक्का–पञ्जा’ ले १६ करोड । हाम्रो टिमलाई दर्शकले मन पराएका छन् तर हाम्लाई हलमा पस्नै गाह्रो भयो । ३५ अन्य फिल्म र ‘छक्कापन्जा’ को व्यापार समान हुन्छ ।
खुला बजारमा मेरो फिल्म रिलिज भएको दिन अर्को फिल्म आउन पाउँदैन भन्न मिल्छ ?
अस्ति अक्षयकुमारसँग डराएर सलमान सर्‍यो, ‘साहो’ को हकमा पनि त्यस्तै भयो । म ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ सँग आएको भए नेपाली फिल्मसँग जुधायो भन्थे । घोडा चढेर आयो भने घोडालाई किन दुःख दिइस् भन्ने घोडा डोराएर भने माल पाएर चाल पाइनस् भन्ने समाज हो यो ।
तपाईं फिल्म बनाउनभन्दा चलाउन राजनीति गर्नुहुन्छ भन्छन् नि ?
ठ्याक्कै त्यसको उल्टो हो । म दस महिना फिल्म बनाउन खर्च गर्छु, २० दिन चलाउन राजनीति गर्छु । अरू साथी १५ दिनमा प्याकअप गर्छन्, बाँकी समय राजनीति ।
अरुले तपाईंलाई हामीसँग जुध्न आइज भन्दा तपाईंचाहिँ आफूलाई सलमान र मेसीसँग दाँज्नुहुन्छ । अनि...
त्यही त मैले यसपटक अरूलाई छोडें ।
त्यसो भए यतिबिघ्न रोइलो किन ?
रोइलो... (जंगिँदै) ? यो मेरो फाइट हो ।
फिल्म चलेपछि तपाईंको घमण्ड बढेर वितरक र हलवालालाई हेपेकाले तपाईंविरुद्ध एकजुट हुन बाध्य भएको भन्ने पनि सुनिन्छ नि ?
यसलाई घमण्ड नै भन्न सक्नुहुन्छ तर बिरालोलाई ढोका थुनेर कुट्न खोजियो भने बिरालो बाघ हुन्छ । पोहोर ३० सो हासउफुल हुँदा ‘जय भोले’ आउनासाथ १५ सो काटियो । चलेको फिल्मको सो घटाउने कि बढाउने ?
हल र वितरकसँग तपाईंको समस्या के हो ?
दुई उपाय हुँदारहेछन् । एउटा, हात जोडेर सो माग्ने । अर्को, अधिकारका रूपमा सो लिने । मेरो काम हलवालासँग हात जोड्ने हैन, फिल्म बनाउने हो । आजको दिनमा भारतमा यशराजले हललाई फिल्म दिन्न भन्न सक्छ तर हलले यशराजको फिल्म चलाउँदिन भन्न सक्दैन । हलमालिक भन्ने सामन्ती शब्द हो, बरु निर्माताचाहिँ मालिक हो । मालिकलाई डिलिट गरेर हलसाथी भन्न थालेको छु, म पनि निर्मातासाथी हो । यहाँ त हलको गेटकिपरले समेत निर्मातालाई हेप्छ । हलभन्दा वितरकमा ज्यादा समस्या छ । मैले हललाई वर्षमा एउटा फिल्म दिन्छु, वितरकले दर्जनौं । पल्ला उसकै भारी हुन्छ । मसँग नेपाली मात्र छ, वितरकसँग हलिउड र बलिउडका चकाचौध फिल्म हुन्छ । अनि उसले विदेशी फिल्मको आड लिएर दीपकको फिल्मलाई बढी सो दिइस् भने... भनेर हललाई तर्साउँछ । ‘छक्कापन्जा २’ को रि–रिलिज हुनुअगाडि हलले ट्रेलर बजाको–बजाई गर्‍यो तर ‘एभेन्जर्स’ आएपछि एक सोसमेत राखिदिएन । वितरकलाई फिल्मप्रति माया हुन्न, एक साता एउटा फिल्म खान्छ, अर्को साता अर्को फिल्म । त्यसलाई म रक्तपिपाशु भन्ने शब्द प्रयोग गर्छु । नेपाली फिल्म मात्र चलाउने हलचाहिँ मभन्दा पीडित छन् ।
मल्टिप्लेक्स नभएको भए तपाईंको फिल्मको व्यापार १९ करोड पुग्थ्यो ? तैपनि मल्टिप्लेक्ससँगै यतिबिघ्न तुष ?
सिंहदरबार राणाले बनाएका हुन्, मन्त्री त्यही बस्छन् भनेर राणाको पूजा गर्ने ? हल पनि आफ्नै स्वार्थका लागि खुलेका हुन् ।
त्यसो भए हलले मन लागेको फिल्म मात्र चलाउँछु भन्न किन नपाउने ?
त्यसको बाउको हल हो र त्यसो भन्न पाउँछ ? म पसल खोल्छु भने सामान बेच्दिनँ भन्न पाउदिनँ, बेच्नैपर्छ । मैले कसैलाई फिल्म दिन्न भनेको छैन । हल र निर्माता पार्टनर हुन्, एकअर्कालाई पार्टनरजस्तै व्यवहार देखाउनुपर्छ ।
तपाईंका फिल्मका कुरा गरौं, ब्लकबस्टर छन् तर कलात्मक रूपमा निर्धो र जोक्सको भण्डार मात्र हुन्छ भन्ने आरोप छ । आफ्ना फिल्मको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ ?
म ‘लाटो देशको गाँडो तन्नेरी’ हो । तपाईंले खोजेका कलात्मक पनि त्यस्तै हुन् । नेपालमा मीन भामबाहेकका निर्देशकको फिल्ममा व्यावसायिक भनिएका फिल्ममा जति पनि कलात्मकता देख्दिनँ । ढिला अभिनय गराउँदैमा कलात्मक हुँदैन । दर्शकलाई स्क्रिनप्लेले मन्त्रमुग्ध बनाउनुपर्छ । कलात्मक चलचित्रले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उभिन मात्र सक्यो भने सलाम गर्छु, तर यहाँ उत्कृष्ट भनेका चलचित्र ‘पञ्चायत’ जसरी आउट हुन्छ भने त्यसको के अर्थ ?
टुक्का मिलाएर संवाद लेख्नुहुन्छ, जोक्स हाल्नुहुन्छ । टिभीमा रुचाइएका हास्य सिरियलजस्तो फिल्म बनाउनु हुन्छ, कलाकार पनि उनै । त्यसैले दर्शक तानेको हैन ?
म सिनेमाको क्राफ्ट र प्रोटागनिस्टलाई कसरी पछ्याउने पढाइदिन्छु, थ्री–एक्ट्स् पनि भन्न सक्छु । के बुझ्नुस् भने म अनपढ जोक्स हाल्ने कमेडियन होइन । जोक्स हालेन भने कमेडी हुन्न । यसको बाबजुद हामीमा कमजोरी छ, बजारको प्रेसर छ । मेरो दर्शक सात कक्षा पढ्ने दर्शकदेखि मन्त्रीसम्म हुन् । जोक मात्र हालेको भए मन्त्री हलमा आउँदैनथे होला । हिजोको सिरियलको क्रेजले अहिले दर्शक हलमा आउने होइन, मनोरञ्जनात्मक नहुँदा सलमानका फिल्म पनि फ्लप भएका छन् ।
तपाईंका फिल्मले व्यापार गरेपनि दर्शकको स्वाद बिगारिहेका छन्, फिल्म भनेकै ॅछक्कापञ्जा’ हो भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै छ भन्ने चिन्ता छ नि ?
पहिले त दर्शक हलसम्म ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ । मैले अनमोल केसीको टाइपको फिल्म बनाउन थालें भने म बिग्रन्छु । तपाईं गाउँपालिका अध्यक्ष हो भने देश कसरी हाँक्ने भनेर सोच्नुपदैन, गाउँपालिका हाँके पुग्छ ।
तपाईंका लागि फिल्मको श्रेष्ठताको मानक व्यापार मात्र हो ?
पक्कै हैन, मैले छन्द मिलाएर राख्ने संवाद पनि कम गर्दै गइरहेको छु तर सुरुमा हेर्ने बजार नै हो । भारतमा ‘लन्च बक्स’ धेरैलाई थाहा छ कि ‘शोले’ ? व्यापारसँगै कला दिन सक्यो भने राम्रो ।
तपाईं व्यंग्य गरेरै यहाँसम्म आइपुग्नुभयो । व्यंग्य भनेको आलोचना नै हो । आफ्ना फिल्मको आलोचना चाहिँ किन पचाउन सक्नुहुन्न ?
म समीक्षकलाई घोचिरहेको हुन्छु । समीक्षकको काम फिल्ममा यो राम्रो छ, यो खराब, बाँकी दर्शकको जिम्मा भन्ने हो । म पनि समीक्षक थिएँ । त्यसपछि कलाकार भएको हो । पछिल्लो चरणमा केही मान्छेले समीक्षाको नाममा गाली गर्न थाले । कबाड फिल्म भनेर लेख्न थाले । यो त स्विकार्न सकिन्न । फेसबुकमा ‘अनमोलजस्तो पो हिरो, तँ बूढा केको हिरो ?’ भनेर लेख्छन् । यस्तासँग भड्किन्छु ।
यसपटक ट्रेलरमा नकारात्मक कमेन्ट आएपछि आलोचकलाई दुश्मन नै ठान्नुभयो । तपाईंका फिल्म सबैलाई मन पर्नै पर्ने ?
म ५० वटा नक्कली आईडी देखाइदिन्छु, सरकारले कारबाही गर्न सक्छ ? कुनै पनि आईडी बनाउँदा नागरिकता चाहिन्छ, फेसबुक आईडी भनेको परिचय हो । नक्कली आइडी बनाएर नकारात्मक कमेन्ट गर्नेसँग चुप बस्न सक्दिनँ ।
यत्रो फिल्म बनाउँदै गरेको मान्छे, फेसबुक/युट्युबमा कसले के कमेन्ट गर्‍यो भन्नेजस्ता कुरामा अल्झन सुहाउँछ ?
त्यसका लागि मेरा मान्छे छन्, उनीहरूको सल्लाहबमोजिम अगाडि बढ्छु । जसरी मेरा ‘हेटर्स’ छन्, त्यसरी ‘फ्यान’ पनि छन् ।
ॅयसपालि त दीपाश्री ब्याउने कुरो छ’ जस्तो चिप प्रमोसन गीत सार्वजनिक गर्नुभयो । नैतिकता र जिम्मेवारीबोध हुन्न ?
मैले प्रोपोगान्डा नगर्ने कोसिस गरें । टिपिकल नेपाली शब्द राखेर ‘जूनको जूनेली...’ गीत ल्याएँ । ट्रेलरमा पनि संयमित भएँ । कथा भन्न खोजें तर यी दुवैको रिजल्ट हेरेपछि लाग्यो कि, मान्छेहरू मलाई फेल गराउन चाहन्छन् । मलाई बजार थाहा छ । त्यो भएर ‘बीच्च बीच्चमा गीत...’ ल्याएँ । योजनाबद्ध ढंगले स्क्यान्डलकै लागि ल्याएको हो ।
भनेपछि तपाईं ॅएटेन्सन सिकर’ हो ?
‘नाम हो, बदनाम हो, गुमनाम मत हो’ भन्ने सूत्रलाई मान्छु ।
ॅछ माया छपक्कै’ मा निर्देशक दीपेन्द्र लामाको इन्ट्रीचाहिँ कसरी भयो ?
उहाँले मूल आइडिया सुनाउनुभयो । स्क्रिप्ट पूरै छ भन्नुभयो तर मैले स्क्रिप्ट लिन्नँ, बरु निर्देशन गर्नुस् भनें । त्यसै पनि म सहायक निर्देशक त सबैको भइहाल्छु ।
तपाईं सहायक निर्देशक, दीपाश्री निरौला सल्लाहकार निर्देशक । निर्देशक कति चेपुवामा परे होलान् ?
मैले सुपरहिट फिल्म दिएँ भने केको चेपुवा ? हस्तक्षेप गरेर फ्लप फिल्म बनाएको भए पो !
आफैं निर्देशनचाहिँ किन गर्नुहुन्न ?
हाम्रो टिममा पूर्ण अधिकार कसैलाई छैन । निर्देशकले गलत डिसिजन गर्दा खुम्चाउनैपर्छ । पोस्ट–प्रोडक्सनमा सम्पादकले खुम्चाउँथ्यो भने हामीले सेटमै अलि खुम्चायौं होला । त्यति हो ।
तपाईं त चलचित्र विकास बोर्डसँग पनि रुस्ट हुनुहुन्छ रे, हो ?
त्यहाँ धेरैले जागिर खान पाएका छन्, बेरोजगारी कम भएको छ, केही चलचित्रकर्मीलाई प्रोत्साहित गरेर पद दिइएको छ, उनीहरूको कमाइ भएको छ । यसबाट उत्साहित छु । विकासचाहिँ यसले विदेशी चलचित्रको गरिरहेको छ । मन्त्रीजी (सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा) र बोर्ड अध्यक्ष (केशव भट्टराई) को आवाज ठूलै थियो, म व्यस्त भएर हो कि आवाज सुन्न छोड्या छु । विदेशी फिल्मलाई कडाई गरिएन भने नेपाली फिल्म पनि बन्थ्यो भन्ने दिन आउँछ । विदेशी फिल्मको टिकट सय रुपैयाँ बढाउनुपर्छ । बिहीबार आएको हिन्दी फिल्म राष्ट्रिय टोपी लगाएकाले सेन्सर गरेर शुक्रबार मेरो फिल्मसँगै हान्न आउँछ । हामीले बनाउनदेखि चलाउनसम्म झमेलाझमेलै सहनुपर्छ । यो अन्त्य हुनैपर्छ ।
प्रस्तुति ः गोकर्ण गौतम
प्रकाशित : आश्विन २५, २०७६ १०:१४
आश्विन २५, २०७६ हिमेश
गत सिजनको अन्त्यसम्म टोटनहमको खेललाई लिएर ‘वाहवाही’ थियो  । जसरी उसले युरोपेली च्याम्पियन्स लिगमा आयाक्स र म्यानचेस्टर सिटीलाई पन्छाएको थियो, प्रशंसाका दुई शब्द खर्च गर्न कन्ज्युसाइँ गर्ने खालेको प्रदर्शन थिएन त्यो  ।
अर्जेन्टिनी प्रशिक्षक मउरिसो पोचेटिनोलाई अब लामै समयका लागि क्लबको जिम्मा दिनुपर्छ पनि भन्न थालिएको थियो । अहिले नयाँ सिजन सुरु हुन पाएको छैन, त्यही टोटनहमको खेललाई लिएर ‘छिःछिः’ भन्न सुरु भएको छ ।
अनि अब त दिन गन्न पनि सुरु भएको छ, यिनै पोचेटिनो कहिले बर्खास्त हुनेछन् त भनेर । टोटनहमका लागि यति कम समयमा कति धेरै समय फेरिएको छ । गत सिजनको आफ्नो अन्तिम खेलमा लिभरपुलसँग माथ खाएको थियो । त्यो खेल गुमाए पनि क्लबमाथि धेरैको धेरै विश्वास थियो, यसले अबका दिनमा पनि राम्रो गर्छ भनेर । आखिरमा क्लब इतिहासमै पहिलोपल्ट च्याम्पियन्स लिग खेल्दा धेरै अपेक्षा गर्नु पनि ठीक थिएन, उपविजेता भयो, ठीकै थियो । तर अहिले दिन कस्तो आएको छ भने टोटनहमले त्यही अपेक्षाको छेउछाउ पनि प्रदर्शन गर्न सकिरहेको छैन । भर्खरै इन्टरनेसलन ब्रेकअगाडि टोटनहम बायर्न म्युनिखको हातबाट नराम्रोसँग पराजित भयो । उसले आफ्नै घरमा भएको खेलमा ७–२ को हार बेहोर्‍यो । टोटनहमले क्लब इतिहासमै आफ्नो घरेलु मैदानमा यसअघि ७ गोल खाएको थिएन् । फेरि त्यो यस्तो खेल थियो, जसमा टोटनहमले सुरुआती अग्रतासमेत लिएको थियो ।
जर्मन च्याम्पियनले पक्कै राम्रो खेलेको थियो तर यो खेलको सबैभन्दा ठूलो विशेषता नै थियो, टोटनहमको सर्वथा बिर्सनलायक प्रदर्शन । फेरि यो यस्तो एक मात्र खेल थिएन, जहाँ टिमले राम्रो खेल्न सकेन भनौं । इंग्लिस प्रिमियर लिगमै पनि टोटनहमले कहाँ राम्रो खेल्न सकेको छ र ? सकेको भए, टिम लिग तालिकाको शीर्षस्थानमा रहेको लिभरपुलसँग १० अंकको दूरीमा रहने थिएन, त्यो पनि जम्माजम्मी सात चरणको खेलको समाप्तिमा । अनि लिगकपमा टोटनहम कोलचेस्टरसँग पराजित भएर प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको पनि धेरै भएको छैन । कोलचेस्टर कस्तो प्रतिद्वन्द्वीभन्दा यसले इंग्लिस लिग संरचनाको चौथो डिभिजनमा खेल्छ र त्यहाँका क्लबहरूको वरीयता तयार पार्ने हो भने यो टोटनहमको तुलनामा कता हो कता पुछारमा छ । सबैखाले प्रतियोगिताको खेल जोड्ने हो भने पनि टोटनहमले जित्न बिर्सेको छ । पछिल्ला नौ खेलमध्ये टिम दुईमा मात्र विजयी रहेको छ ।
जनवरीमा फुलहमलाई पराजित गरेयता टोटनहमले प्रतिद्वन्द्वीको घरमा कुनै खेल जित्न सकेको छैन । आर्सनल र ओलम्पियाकोजविरुद्धका खेलमा टोटनहम दुई गोलले अगाडि रह्यो तर खेल टुंगिँदा नतिजा रह्यो, बराबरी । लेस्टरविरुद्ध लिगमा पनि सुरुआती अग्रता त लियो तर अन्त्यमा खेल टुंगिँदा हार्ने टिम बन्यो । यस्तोमा टोटेनहमले बायर्नविरुद्धको खेल गुमाउनु संयोगमात्र थिएन । अनि, प्रश्न स्वाभाविक बन्छ– कुरा कहाँनिर
ब्रिगियो त ? सबैभन्दा पहिलो कुरा यिनै प्रशिक्षक पोचेटिनोको । आजभन्दा केही वर्षअगाडिसम्म पनि इंग्लिस फुटबलमा अर्जेन्टिनीको उपस्थिति कल्पना नै गर्न सकिन्न थियो । सन् असीतिरको फोकल्यान्ड युद्धपछि चिस्सिएको दुई देशबीचको सम्बन्धको प्रभाव त्यहाँको फुटबलमा पनि परेको थियो । अहिले दिन फेरिएका छन्, इंग्लिस फुटबलमा अर्जेन्टिनी प्रशिक्षक, अझ भनौं पूर्वखेलाडीको उपस्थिति सहज बनेको छ । नत्र जति बेला उनी खेल्थे, इंग्ल्यान्ड र अर्जेन्टिनाको फुटबल ‘राइभरि’ उत्कर्षमै थियो ।
इंग्लिस फुटबलको समर्थक हो भने सन् २००२ को विश्वकप कसरी भुल्न सक्छ र ? लिग चरणमा इंग्ल्यान्ड र अर्जेन्टिना एउटै समूहमा थिए । जति बेला दुई टिम एक आपसमा भिडेका थिए, माहोल निकै तनावपूर्ण थियो । खेल पनि उत्तिकै तनावपूर्ण रह्यो, इंग्ल्यान्ड १–० ले विजयी रह्यो । डेभिड बेकह्यामले त्यसमा पेनाल्टीबाट निर्णायक गोल गरेका थिए । त्यो पेनाल्टीका कारक थिए, यिनै पोचेटिना । उनले माइकल ओवेनमाथि फल खेलेका थिए । त्यो विश्वकपमा अर्जेन्टिना लिग चरणबाटै बाहिरियो । पोचेटिनोका लागि त्यो हार र अर्जेन्टिना नकआउट चरण पनि पुग्न नसक्नुको प्रदर्शन कति धेरै असह्य थियो भने उनी घर पुगेयता आफ्नो कोठामा के छिरे, लगभग १० दिन बाहिर नै निस्केनन् । उनी अहिले पनि भन्छन्, ‘त्यो दिन सम्झँदा अहिले पनि मन उदास हुन्छ ।’ भन्न त उनी लिभरपुलविरुद्धको च्याम्पियन्स लिग फाइनल गुमाउँदा पनि उत्तिकै दुःख लागेको बताउँछन् ।
सायद अहिले पनि उनी उत्तिकै निराश छन् कि ? अहिले टोटनहमको खराब प्रदर्शनका सबैभन्दा बढी कोही आलोचक बनेका छन् भने ती क्लबकै समर्थक हुन् । पोचेटिनाको भाषामा यी समर्थकको यति हकचाहिँ बन्छ बन्छ । उनको भनाइ छ, ‘जस्तो अपेक्षा गरिएको थियो, त्यस्तो नतिजा निस्केन भने आलोचना त हुन्छ नै । पछिल्लो पाँच वर्षमा हाम्रो प्रदर्शन राम्रै रह्यो । त्यति बेला सबैले राम्रो माने । अहिले खराब खेलिरहेको, आलोचना पनि हुनैपर्‍यो ।’
उनी के पनि भन्छन् भने अहिले क्लबमा चाहिएको भनेको एकता हो । एकले अर्कोको आलोचना गरेर, एकले अर्कोको खेलमा खोट देखाएर हुने केही पनि होइन, टिम फेरि राम्रो लयमा फर्कने एक मात्र उपाय भनेकै सबै मिलेर उत्कृष्ट खेल पस्कने हो । उनले यत्ति गह्रौं र भावनात्मक कुरा इंग्लिसमा भन्न गाह्रो भएपछि स्पेनीमा भनेका थिए । उनी पोस्ट म्याच कन्फ्रेन्समा इंग्लिसको बीच–बीचमा स्पेनी छिराउँछन् । यसले उनलाई टिम कस्तो स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ, त्यसबारे व्याख्या गर्न सजिलो हुन्छ । उनी प्रशिक्षकका रूपमा खुसी पनि छन्, टोटनहमलाई आफ्नो शतप्रतिशत दिन तयार छन् । के उनी इन्टरनेसनल ब्रेकपछि आफ्नो टिमलाई फेरि पुरानै लयमा फर्काउन सक्षम हुनेछन् त ? यो त्यही प्रश्न हो, जसमा धेरै प्रतिशत टिमले किन खराब खेल्यो भन्ने पनि जोडिएर आउँछ । साँच्चै टोटनहमले यो सिजन किन राम्रो गर्न सकिरहेको छैन ?
इंग्लिस फुटबलमा निकै पुरानो र उत्तिकै लोकप्रिय क्लबमा पर्छ, टोटनहम । इंग्लिस फुटबलमा के पनि भनिन्छ भने टोटनहम समर्थक हुनु भनेको दुःख र पीडा सहन तयार हुनु हो । यस्तो किनभन्दा क्लबले जति बेला केही गर्ला र जित्ला भन्ने अनुभव हुन्छ, अहिलेको जस्तै प्रदर्शन दोहरिन्छ, क्लबको भाग्यमा मार पर्छ । क्लब व्यवस्थापनमा ठूला प्रतियोगिता जित्नुपर्छ र यसका लागि खर्च पनि गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छैन पनि भनिन्छ ।
यो अहिलेको मात्र समस्या होइन, यो त एक प्रकारले टोटनहममा दोहरिरहेको प्रवृत्ति हो । निकै राम्रो र सफल क्लबीच जुन अन्तर हुन्छ, त्यसमै प्रायः अलमलिरहेको हुन्छ, टोटनहम । अहिलेको टिमका लगभग अधिकांश प्रमुख खेलाडीसँगै खेल्न थालेको पाँच वर्ष जति भयो । अहिले उनीहरूबीच कलह छ । केही प्रमुख खेलाडीले सिजन सुरु हुनुअगाडि अन्यत्र जान इच्छा पनि देखाए । यस्तो गर्ने खेलाडी सात थिए, तर जान भने कोही गएनन्, यसले टिममा ठूलै समस्या भित्र्यायो । केही खेलाडी घाइते छन्, केही खेलाडीले मानसिक रूपमा राम्रो गर्न सकिरहेका छैनन् । जब कि पोहोर सिजनको खेलको आधार मान्दा टोटनहमले जबरदस्त पो खेल्नुपर्ने हो । जब एउटा सिजनबाट अर्को सिजन गइन्छ, क्लबले आफूलाई त्यहीअनुसार रूपान्तर गर्न सक्नुपर्छ । प्रशिक्षकले आफ्ना खेलाडीलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ, हामी यसपल्ट अझ राम्रो गर्छौं भनेर । यसका लागि प्रशिक्षकलाई व्यवस्थापनको सहयोग चाहिन्छ । ठ्याक्कै भन्दा टोटनहम यस्तै–यस्तै परिस्थितिमा चुकिरहेको छ । यो अहिलेको रोग पनि होइन, पहिलेदेखिकै हो ।